» मुन्नी र शुभम नै बन्लान् डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको विजेता ?
मुन्नी र शुभम नै बन्लान् डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको विजेता ?
२ पुष २०७७, बिहीबार १५:०९
मकवानपुर, २ पुस । चर्चित हाँस्य टेलिसिरियल भद्रगोलबाट चर्चित बनेकी मुन्नी अर्थात कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ को जित नजिक छन् । फाईनलमा पुगेको यो जोडीले शो जितेमा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको पहिलो सिजनको विजेताका रुपमा उनीहरुको ऐतिहासिक चर्चा समेत हुनेछ । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एकमात्र वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री जोडीका रुपमा उनीहरु स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित छन् । उनीहरुले शोको पाँचौँ हप्तामा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाएका थिए । नेपालको रियालिटी शोहरुमा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीबाट ईन्ट्री गरेर शो नै जितेको त्यत्ति ईतिहास छैन तर यो जोडीले शो जित्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पहिलो नृत्यबाट दक्षता बढाउँदै लगेको यो जोडी फाईनलसम्म आईपुग्दा फोकस जोडीका नामले पनि चर्चित बनेका छन् । शोका केही प्रस्तुतिहरुमा यो जोडीले यत्ति धेरै चर्चा पायो कि निर्णायकहरुको फोकस सिधै मुन्नी र शुभमको जोडीतर्फ सोझिएको थियो । धेरै नेपालीहरुको मनमा राज गर्न सफल प्रियनाले दर्शकहरुबाट सर्वाधिक भोट पनि पाउँदै आएको दर्शकहरुको बुझाई छ । के मुन्नी र शुभमले यो शो जित्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
विभिन्न म्युजिक भिडियोहरुमा पनि अभिनय गरेकी उनले लिटिल क्वीन २००८ मा फर्स्ट रनर अप हुनुका साथै मिस टिन टुरिजम २०१८ मा विजेता पनि भएकी थिईन् । उनी मिस टिन २०१८ मा उत्कृष्ट ५ भित्र परेकी थिईन् । उनी फेसन भ्लगर, मोडल, थियटर आर्टिस्ट, गायिका तथा डान्सर पनि हुन् । यसर्थ उनको फ्यान फलोईङ फेसनको दुनियामा पनि रहेको छ । त्यसैले पनि प्रियना र शुभमले यो शो जित्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यस्तै शुभले यसअघि पनि डान्सिङ रियालिटी शो बुगीवुगीको उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेर डान्सिङको दुनियाँमा छुट्टै दर्शकहरु कमाईसकेका छन् । त्यसैले उनलाई पनि डान्सरहरुको राम्रो साथ रहेको छ । शुभम र प्रियनाको फ्यान फलोईङ धेरै भएकोले पनि यो जोडीले शोमा बलियो पकड पनि बनाउँदै आएका छन् । फाईनलसम्म आईपुग्दा डान्समा पनि तहल्का पिटेकाले यो जोडीले शो जित्नसक्ने सम्भावना बढेको अनुमान लाउन सकिन्छ ।
प्रियम जोडीले पाँचौँ हप्ता २४ अंक, छैटौँ हप्ता २२ अंक, सातौँ हप्ता २६ अंक र आठौँ हप्ता २२ अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै नवौँ हप्ताको दुबै दिन समान २५–२५ अंक, दशौँ हप्ताको दुबै दिन समान २७–२७ अंक र एघारौँ हप्तामा २६ र २४ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले बाह्रौँ हप्ता ३० र २७ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले बाह्रौँ हप्ता सकिँदा जम्मा ३०५ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पाँचौँ र छैटौँ हप्ता ओपन स्टाईल, सातौँ हप्ता कर्मग्राफी एण्ड किजोम्बा र आठौँ हप्ता ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । त्यस्तै नवौँ हप्ता फ्युजन साल्सा र कन्टेम्प्ररी, दशौँ हप्ता ट्वेर्किङ प्लस कलिहप र ओपन स्टाईल तथा एघारौँ हप्ताको दुबै दिन ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले एघारौँ हप्ताको शुक्रबार कोरियोग्राफर युमी बलामीसँग मिलेर प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले बाह्राँै हप्ता दुबै दिन ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् ।